डेरामा बस्ने केटी :: Setopati
डेरामा बस्ने केटी
प्रेमकृष्ण श्रेष्ठ वैशाख २१
एक दशक अघिको कुरा हो। सँगै एउटै फ्ल्याटमा बस्दा, बस्दा त्यो डेरामा बस्ने केटी मलाई झन्-झनै मन पर्न थालेको थियो। म सोच्थेँ त्यतिबेला, यसरी नै माया फैलिँदै, भरिँदै जाने हो भने बेलुनजस्तो प्याट्ट फुट्न के बेर! यो अबला मुटु पनि।
म घरबेटीको छोरो, उहीँ फ्ल्याटमा वल्लो कोठामा बस्थेँ भने ऊ पल्लो कोठामा बस्थी। मेरो मनभित्र ऊप्रतिको माया अथाह थियो। कहिले जम्का भेट हुँदा भन्न मन लाग्थ्यो- आऊ डेरावाली, के भिन्दाभिन्दै कोठामा सुत्ने? मेरी रानी बनेर एउटै कोठामा सुतौँ। डेरावालीबाट तिमी पनि घरवाली बन।
मनमा नानाभाँतीको कल्पना आए पनि कहाँ सम्भव थियो र सोचे जस्तो भन्न। मसित भेट हुँदा मुसुक्क हाँस्थी। सोध्थेँ, ‘कहाँ जाने डेरावाली?’
कति पनि रिसाउँदिन। बरु मायालु नजरले मतिर हेर्दै बोल्थी, ‘हजुरले देख्नु भएन मेरो लुगा पनि?’
‘तिम्रो युनिफर्ममा ध्यान कहाँ छ र? म त केवल तिमीलाई मात्र हेर्दैछु।’
डेरावाली मेरो कुरा सुनेर मुसुक्क हाँस्थी। म उस्को मुस्कान, उस्को ‘हजुर’ शैली, उस्को मप्रतिको सम्मान, इसारा हरेक कुरामा प्रभावित हुँदै गएको थिएँ।
म उस्लाई हरेक प्रकारको सहयोग गर्थेँ त्यो बेला। केही मिठो खानेकुरा छ भने पनि ‘खाऊ, डेरावाली’ भन्दै आधा उस्लाई दिन्थेँ। कैँयन पटक उस्को फी तिर्न आफू रितिएँ।
आफ्नो घरको डेरा भाडा आफैले तिरेर, उस्लाई घरवाली बनाएर म डेरावाल बनेको थिएँ। उस्लाई प्रेम प्रस्ताव गर्ने हिम्मत बटुल्दा बटुल्दै मैले प्रेम प्रस्ताव गर्न सकेको थिइनँ।
मलाई त्यो बेला सामाजिक प्रतिष्ठाको डर थियो। किनभने मेरी भाउजू पनि डेरावाली नै थिइन्। मलाई थाहा थियो, जातभातमा कट्टर मेरी आमाले पक्कै कान्छी बुहारी पनि डेरावाली नै ल्याउन पक्कै दिने छैनन्।
डेरावालीसित मेरो प्रेम टुसाएको एक वर्ष नबित्दै मेरी आमाले मलाई डाकेर अह्राउनु भयो, ‘तँ अब पुरानो घरमा बस्न जा। नयाँ घरको हेरविचार तेरो दाइ र भाउजूले गर्नेछन्।’
मैले ‘किन’को कारण सोध्नै सकिनँ। मनमा चिसो मात्र पस्यो, डेरावालीसितको मेरो प्रेमको सुइँको आमाले कसरी पाउनुभयो! डेरावालीको कोठाको छेवैको कोठामा बस्न नपाएर निलम्बित भएको त्यो दिन म खुबै रोएँ।
केही महिना मलाई पुरानो घरमा सारियो। चार महिनापछि म नयाँ घरमा जाँदा उस्को कोठाको ढोकामा पर्दा अर्कै रंगको लगाएको थियो। मेरो पुरानो प्रेमिल ढोकाबाट कोही नौली युवती बाहिर आई, त्यो युवती, मेरी डेरावाली थिइन।
उस्को ढोकाबाट कोही अरु नै युवती रातो पर्दा छिचोल्दै बाहिर आउँदा म भित्रभित्रै भन्थेँ- ऐ डेरावाली, म हरियो पर्दा र तिमीलाई आज पनि मिस गर्छु।
समयको परिवर्तनसँगै दाजुको जुवाप्रेमले घरमा एउटा ठुलै आर्थिक समस्या आयो। आर्थिक समस्यासँगै घरहरु बैँकमा धितो राख्नुपर्यो। बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा दुइटै घर लिलाम भयो। नचाहेर पनि डेरावालीका सारा स्मृतिहरु अरुलाई नै सुम्पेर गएँ।
एउटा ढोका उखेलेर ल्याउन मन लागेको थियो, तर सकिनँ। तर स्वयम आफै पनि डेरावाला भएर पनि आँखामा भने अझै त्यही डेरावालीको एक दर्शनीय प्यास थियो।
संसारमा खोजे के पाइँदैन? एकदिन न्युरोडमा त्यही डेरावालीसित भेट भयो। ऊ पहिला जस्तो मुसुक्क हाँसी। उस्को हाँसोले लाग्यो, पहिला अधुरा भएका दिलको पाना आज आएर ओछ्याउँ।
म डेरावाल, ऊ डेरावाली एक इन्च पनि सामाजिक मर्यादाको दूरी देखिनँ। पहिला जस्तो मैले आत्मिय भाव चोरेर सोधिहालेँ, ‘ए डेरावाली, तिमी कहाँ बस्छौँ अचेल?’
‘डेरावाली नभन्नुहोला, म पनि घरवाली नै हुँ अचेल। यतै लुभूतिर हाम्रो सानो घर छ अहिले’ अघिको मुस्कान सबै गलहत्याएर, आँखा ठूल्ठूला पारी रिसाएर बोली।
काठमाडौंको शरीरमा चार आना किनेर दुई तला ठडयाउँदा, हिजोको यही गुलियो डेरावाली आज आएर कति तितो भएको होला! भित्रभित्र सोचेँ।
‘के जस्तो लाग्छ?’ स्पष्ट जवाफ फर्काइन।
सिउँदोमा सिन्दुर त थिएन तर पनि केही जवाफ फर्काइनँ।
‘घर लिलाम गरिसक्नु भएछ रे, हो? अहिले तिमी कहाँ डेरा बस्दैछौ?’ हिजोकी डेरावाली, आजकी घरवालीले उल्टो मलाई प्रश्न सोधी।
सबै कुरा थाहा रहेछ यो डेरावालीलाई, मनमनै सोचेँ। मात्र बोलेँ, ‘कालिमाटी।’
कालिमाटी भन्नेवित्तिकै आज बिहान घरबेटीले बोलेको छिटो कोठा सरेसको ध्वनी मेरो स्मृतिमा आयो।
सोधेँ, ‘घरमा सानो एउटा कोठा छैन, घरवाली?’
मेरो प्रश्नले, ऊ खुब मरी मरी हाँसी। सायद उस्को ओठमा काउकुती ‘घरवाली’को सम्बोधनले लगाएको हुनुपर्छ भनेर चाल पाइहालेँ। समयको खेल न हो, आज आएर तिमीले काठमाडौँ जित्यौ, मैले हारेँ। यस्मा यति कठोर प्रतिसोध किन? मनमनै सोधेँ।
झण्डै पाँच सेकेण्ड हाँसेपछि बोली, ‘सरी, तिम्रो लागि अहिले कोठा खालि छैन।’
‘हजुर’ आज आएर ‘तिमी’मा झरे पनि मुस्कान भने हाँसोमा उक्लिसकेको रहेछ। जस्को आवाजमा मैले स्वार्थसिवाय अरु केही भेटाइनँ। जाबो एउटा कोठा नदिने डेरावालीसित म मनमुटु कसरी मागूँ?
यही सोच्दै म बाटो नापेँ आफ्नै डेरातिर। हिजोकी डेरावाली र आजकी घरवालीले मलाई आँखा तन्काई तन्काई नै परसम्म हेरेको हुनुपर्छ, त्यो बेला। स्मृतिमा आइरह्यो मात्र एक अबला, अव्यक्त र टुहुरो मेरो अभिव्यक्ति- आऊ डेरावाली, के भिन्दाभिन्दै कोठामा सुत्ने! मेरी रानी बनेर एउटै कोठामा सुतौँ। डेरावालीबाट तिमी पनि घरवाली बन।
पूरै आँखा, डेरावालीसितको स्मृतिले ढाकेर म निसासिने यो काठमाडौँ सहरमा डेरा खोज्दै छु।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २१, २०७८, १७:५२:४४
एउटा जीवन अनन्तसम्म
विपत्तिका साइरन बजाउँदै
समय, सपना र ऊ
मृत्युवरण प्रजातन्त्रले पनि गरिरहेछ